Heathrow si ay u bilawdo lacag-bixinta £ 5 ee ka-degista garoonka diyaaradaha
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » Heathrow si ay u bilawdo lacag-bixinta £ 5 ee ka-degista garoonka diyaaradaha
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK • Wararka kala duwan
Heathrow ayaa ku dhawaaqday inay baareyso soo jeedin ah in la hirgeliyo Charco Access Charge (FAC) oo loogu talagalay gawaarida dabayaaqada 2021 si looga hortago in gaari uu hogaaminayo ka soo kabashada garoonka diyaaradaha ee COVID-19 ee faafay.
Kharashka, oo la filayo inuu ahaado £ 5, ayaa qayb ka ah dib u eegisyo dhowr ah oo lagu sameeyay qorshaha gegida diyaaradaha ee garoonka sababo la xiriira burburka dhow ee tirada rakaabka iyo £ 1.5 bilyan oo khasaara ah oo soo gaadhay 2020.
Covid-19 ayaa mowjado naxdin leh u soo dirtay waaxda duulista. Natiija ahaan, Heathrow waxay dib u eegis ku sameysay dhammaan maalgashiyadeeda qorshaysan oo ay galeen markii in ka badan 80m rakaab ah ay isticmaalayeen garoonka diyaaradaha sannad kasta.
Dib-u-eegidgan ayaa horseeday isbeddello dib u qiimeynaya kharashaadka garoonka diyaaradaha ee mashaariicda gelitaanka dusha sare si saameynta deegaanka ay u sii yaraato, halka ganacsiga iyo shaqooyinka ay wada shaqeeyaan la ilaaliyo inta lagu jiro xilligan rakaabka oo aad u yar.
Heathrow waxay rajeyneysaa gawaarida yar ee wadada sababo la xiriira hoos u dhaca baahida rakaabka, laakiin walwalka ku saabsan adeegsiga gaadiidka dadweynaha sababo la xiriira faafida ayaa ah caqabad hor leh oo horay u socota. Iyada oo tan laga jawaabayo, FAC waxay beddeli doontaa qorshayaasha aagga Heathrow Ultra Low Low Emissions (HULEZ) ee lagu dhawaaqay Maajo 2019, in kasta oo qorshooyinka dhimista qiiqa qiiqa mustaqbalka la tixgelin karo.
Qorshaha dib loo eegay wuxuu hubinayaa Heathrow inuu wali awood u leeyahay inuu gaaro himilooyinkiisa gaadiidka dadweynaha ee muddada-dheer iyo, tallaabooyin kale, oo ay ku jiraan HULEZ, wali waa la fulin karaa haddii loo baahdo.
Dakhliga laga soo aruuriyay FAC waxaa loo isticmaali doonaa in lagu kabo qarashka garoonka, oo ay ku jiraan maalgashiga mustaqbalka ee waara, iyo sidoo kale in la dhimo qarashka rakaabka.
La-tashi ayaa lala bilaabay daneeyayaasha ku saabsan faahfaahinta soo jeedinta cusub ee Heathrow, oo ay ku jiraan sida loo maareynayo FAC, iyadoo la filayo in faahfaahinta la soo gabagabeeyo sannadka 2021.
Lacagta la siinayo (Forecourt Access Charge) waxay khuseysaa dhammaan gawaarida galaya afaafka hore ee boosteejooyinka Heathrow, in kasta oo ka reeban qaarkood la adeegsan doono sida kuwa haysta calaamada buluugga ah iyo gawaarida gurmadka. Liiska buuxa ee ka-dhaafitaannada wali lama dhammaystirin.
Rakaabku waxay durbaba haystaan ​​ikhtiyaar kale oo ah in lagu dejiyo baarkinkeenna dhaadheer ee maanta oo ay u safraan boosteejooyinka iyagoo adeegsanaya bas bilaash ah.
Agaasimaha Heathrow ee marinka marinka Tony Caccavone wuxuu yiri:
Saameynta cudurka faafa ee COVID-19 aad ayuu u xumaa, gaar ahaan warshadaha duulimaadyada iyadoo tirada rakaabka ee Heathrow ay ka hooseyso 80% ganacsigana ay lumineyso £ 5m maalintii. Isbeddeladani waxay naga caawin doonaan inaan ganacsiga ku ilaashanno dhaqaale isla markaana aan badbaadinno shaqooyinka muddada gaaban, iyadoo sidoo kale noo oggolaaneysa inaan ku sii socono dhabbooyinkeenna fog ee ah inaan siino mustaqbalka fursado gaadiid oo aamin ah, waara oo la awoodi karo.